Der Celebrity Clinic | Beauty MM
ကျွန်မတို့ Der Celebrity Clinic ရှိ ဆရာဝန်များသည် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ အထူးကျွမ်းကျင်သော ထိပ်တန်းပါရဂူများ ကိုယ်တိုင် Advenced နည်းပညာနှင့်လက်တွေ့ဆွေးနွေးသင်ကြားပြသပေးခဲ့သော နည်းစနစ်များဖြင့် မျက်နှာပြင်အစိတ်အပိုင်း အစရှိသည့် အလှအပဆိုင်ရာပြုပြင်ခြင်းများကို ကျွန်မတို့ Der Celebrity Clinic က မိမိတို့စိတ်ကျေနပ်စေမည့် အလှအပကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက် ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးသော ကြိုးများနဲ့ ကျွမ်းကျင် အတွေ့အကြုံရင့် ဆရာဝန်များက မခွဲမစိတ် မနာမကျင်စေပဲ အချိန်အနဲငယ်အတွင်းမှာ ပြန်လည် နိုပျိုနိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးနေပြီနော်။
09787900879 , 09451889009 , 01559377 Ext: 6216
No. 0216, 1st Floor, Excel Treasure Hotel & Shopping Mall, Kabar Aye Pagoda Road, near Shwe Gon Dine, Bahan township, Yangon, Myanmar
Collagen Thread Lifting 20% discount
2009 တုန်းကလည်း ဒီပုံလေးပဲ…. ခု 2019 မှာလည်း ဒီလိုလေး နုတုန်း ချောတုန်းပါလား …
Collagen Thread Lifting လေး ရှိနေမှတော့ ၁၀နှစ်မကလို့ နှစ် ၂၀လည်း နိုပျိုနေနိုင်ပါပြီ…
Collagen ကြိုးလေးတွေက မျက်နှာအသားအရေကို တင်းရင်း ကျစ်လစ်စေပြီး ပြန်လည်နုပျိုစေပါတယ်…
20% discount ပေးထားလို့ ဈေးနှုန်းလဲသက်သာနေပြီလေ…
အရည်အသွေးမြင့် America, Korea, Italy ပစ္စည်များနှင့် ဝါရင့်ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်များကိုယ်တိုင် ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေပါပြီ…
Promotion ကာလ – 8.3.2019 to 31.3.2019
မျက်နှာအသားအရေ ကြည်လင် ဝင်းပ နေချင်ပါသလား…Der Celebrity ရဲ့ Glow Face Treatment Promotion လေး ရှိပါတယ်…ဆေးမထိုး မနာမကျင်စေပဲ ငြိမ့်ငြိမ့်ညောင်းညောင်းလေးနဲ့ လှသွားမှာနော်…😊
Glow Face Treatment လေးမှာဆိုရင်တော့ …
Setp (1) –
– Oxyjet Therapy နဲ့ မျက်နှာကို အတွင်းလွှာထဲထိ Deep Cleansing လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် နေ့စဉ်ညစ်နွမ်းထားတဲ့ အလွှာတွေ အားလုံးကို သန့်စင်ဖယ်ရှားပေးပါတယ်…
– မျက်နှာကို Oxygen ပေးခြင်း ဖြင့် ပိုပြီး လန်းဆန်း ကြည်လင် အားပြည့်နေစေပါတယ်…
– Vitamin C ဓာတ် သွင်းပေးခြင်း မျက်နှာအသားအရေ တစ်ပြင်လုံးကို နုပျိုတင်းရင်းစေပါတယ်…
– Facial Aloe Vera Serum ကို Electrophoresis နည်းပညာဖြင့် စိမ့်ဝင်စေခြင်း ဖြင့် မျက်နှာပြင် အတွင်းအပြင် အလွှာအားလုံးကို အားဖြည့်ပေးပြီး နူးညံ့ချောမွေ့ကာ ဝင်းဝင်းပပလေးနဲ့ Glow ဖြစ်နေတဲ့ အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါပြီ…
ပုံမှန်ဈေး – ၁ကြိမ် – 100,000
ယခု Promotion ဈေး – ၁ ကြိမ် ( 40% OFF ) – 59,000
တစ်လစာ ၃ကြိမ် Package (50% OFF ) – 149,000
လှသထက် လှစေဖို့ Der Celebrity ရဲ့ နွေရာသီ Promotion ဈေးရောင်းပွဲကြီး လာပါပြီ..
Promotion ကာလ = 9.3.2019 ~ 31.3.2019
ဆေးမထိုး မနာမကျင်ပဲ မျက်နှာလေး ဝင်းပနေစေမယ့် Glow Face Package – 50% OFF !!
အဆီကျ ပိန်လိုသူတွေအတွက် Mesofat Slimming Package – 30 % OFF !!
မျက်နှာလေးကို V Shape လေးလို သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ –
– V Shape Botox – 20% OFF !!
– V Shape Filler – 20% OFF !!
ဝက်ခြံ ၊ တင်းတိပ် ၊ အသားအရောင်မညီ ၊ ချိုင်းမဲ ၊ ဒူးမဲ တို့ကို သက်သာပျောက်ကင်းစေမယ့် Chemical Peeling Package – 50% OFF !!
မျက်နှာ အမာရွတ်တွေ ချိုင့်ခွက်တွေ ပျောက်ပြီး ချွေးပေါက်တွေ ညီညာစေမယ့် Derma Roller Package – 20% OFF !!
မျက်လုံးဘေး အရေးအကြောင်း ၊ နဖူးအရေးအကြောင်း၊ မျက်မှောင်ရှုံ့အရေးအကြောင်း အားလုံးတို့ အတွက် Botox – 25% OFF !!
အဝေးမှ လှမ်းဝယ်ထားချင်သူတွေအတွက် AYA , KBZ , CB , UAB , Wavemoney စတာတွေနဲ့ ငွေလွှဲဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ 😊
✅ Nose Thread Lifting
1 hour • 500000
နှာခေါင်းကြိုးထိုးခြင်းအားဖြင့် နှာတံကို မြင့်စေခြင်း၊ သေးသွယ်စေခြင်း၊ ကော့စင်းစေခြင်းများဖြစ်အောင် ပုံဖေါ်ပေးသည်
Duration varies • 15,000 per piece ( small ), 150,000 per piece ( large )
အသားအရေ လျော့ရဲခြင်း၊ တွဲကျခြင်းများကို ပြန်လည် တင်းရင်း ပင့်တင်ပေးသည်။ ငယ်ရွယ်သော မျက်နှာ ပြန်လည်ရရှိနိုင်သည်။
30 minutes • 35,000/55,000
မျက်နှာပေါ်ရှိ ဝက်ခြံ၊တင်းတိတ်များကို ပျောက်ကင်းစေသည်။ အသားအရောင် မညီခြင်းကို ညှိုပေးနိုင်သည်။ ဟောင်းညစ်နေသော dead cell များကို ကွာစေခြင်းဖြင့် အရေပြားအလွှာသစ် တက်လာစေသည်။
30 minutes • 50,000
မျက်နှာရှိ cell များကို ကျန်းမာသန်စွမ်းလှပစေရန် အားဖြည့်တင်းပေးသော Facial Treatment ဖြစ်သည်။
Duration varies • 75,000
ခန္ဓာကိုယ် ရှိ မလိုအပ်သောနေရာများတွေရှိနေသော အဆီများကို ချေဖျက်ပေးသည်။
လှုပ်ရှားမှုတိုင်းတွင် calorie သုံးနှုန်းကို မြှင့်တင်ပေးခြင်းအားဖြင့် ခန္ဓာကိုယ် ကို သွယ်လျစေသည်။ Gym ကစားသမားများတွင် သာမာန်ထက် ပို၍ အကျိုးအာနိသင် ထက်စေသည်။
Duration varies • 89,000
မျက်နှာကို collagen ဓာတ် ဖြည့်ပေးခြင်းအားဖြင့် တင်းရင်းကောင်းမွန်သော မျက်နှာဖြစ်စေသည်။
Duration varies • 150,000
စင်ဒရဲလားလေးကို ဖြူဝင်းကောင်းမွန်သော အသားအရေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေသည်။
Duration varies • 5,000 per unit
မျက်နှာပေါ်ရှိ အရေးအကြောင်းများ ပျောက်စေသည်။ လုံးဝိုင်းနေသောမျက်နှာကို သွယ်လျစေသည်။ ခြေသလုံးသားများ ကြီးေ
Duration varies • 500,000
မျက်နှာရှိ မေ့စေ့၊ နှာခေါင်း၊ ပါးတို့ကို ပုံဖေါ်ပေးသည်။
Der Celebrity မှာ AYA bank card မည်သည့်ကဒ်ကိုမဆို 10% discount တွေ ပေးနေပြီလေ…
လှသည်ထက် ပိုလှနေစေဖို့ Der Celebrity ကို ခုပဲ သွားလိုက်ရအောင်..
အသေးစိတ် သိချင်တာလေးတွေကို Page message box မှတဆင့်၊ ဒါမှမဟုတ် ဖုန်းလေးဆက်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ် မေးမြန်းလို့ရပါပြီ။